Kuphi ukulala kwesokudla SEO incazelo, ucabangela Search Engine Marketing?
Ngiyakwazi ukuzwa izimpendulo ezingaqondakali ezivela kubaholi abaningi bebhizinisi ngisho nangempumelelo, abaphathi abahlakaniphile nabahlakaniphile. Bonke bakhononda ngokudideka ngemigomo ye-Search Engine Marketing (SEM) kanye nokwanele kwe-SEO incazelo. Eqinisweni, zombili imibono ikhulu kakhulu futhi ngakho-ke ngokuvamile kukhulunywa ngokungahambisani nabezimboni. Masibhekane nakho - iningi lazo lide kakhulu ekungeneni ngempela, nje ukuletha ukudideka okuningi kunalokho.
Masenze izinto zicaciswe ekugcineni. Yebo, ukuSebenza kwe-Engine Engine (SEO) kanye ne-Search Engine Marketing (SEM) kuqondiswe ngempela kuzinjini. Kodwa bakwenza ngezindlela ezimbili ezahlukene, okungenani ngokusebenzisa amagama ambalwa ahlukene. Ngisho ukuthi, Ukukhangisa nokuSebenza kwakunezincazelo eziphelele kakhulu futhi ezibanzi, hhayi ukusho isicelo sabo jikelele. Ngiphakamisa ukuthi ngibheke uhlu olufushane lwezingxabano ezisemqoka phakathi kwabo, ukuze uthole ukuqonda okulungile kwe-SEM, igcwaliswe ngokugcwele ngokucacile kwe-SEO incazelo.
Masibe nesifaniso esingenasici sokubona umehluko ngesikhathi esisodwa. Cabanga ukuthi i-Digital Marketing yakho iyimoto. Ukuze usebenze kahle, imoto yakho idinga ukunakekelwa kahle kwenjini yayo, ngokuhambisana nokulondoloza, isibonelo, ukunikezwa kwamafutha okuphindaphindiwe. Ukuthatha lezi zifanekiso ezizoba yisiqalo, singaqhubeka nokuqhathaniswa okulula. Yebo, ukuqhathanisa kwami ​​ngesibindi akude nanoma yikuphi ukubonwa okuqondile, kodwa kumele bakwenze, okungenani okwamanje.
Ukugcinwa kwe-injini ye-injini kuzofana nokusebenza kwe-Search Engine Optimization. Ihlanganisa izici ezihlukene, njengokuhlola ingcindezi, amafutha, amazinga wamanzi, kanye nokubandakanya eminye imisebenzi eminingi ehlukene ukuze kugcinwe imoto. Ukuze usebenze kangcono, ungahlala uthola izingxenye ezengeziwe, noma ubeke esikhundleni sezinto ezintsha. Ukwenza kanjalo, uzothola isipiliyoni esihamba phambili kakhulu sokushayela nsuku zonke. Yilokho engikukholelwa ukuthi incazelo elula ye-SEO yiyona. Ukwenza lokhu kufanekisayo kufinyelele nakakhulu, singakuqhathanisa kalula nalesi sici esijabulisayo sobunikazi bezimoto esizondwa yingxenye yezingonyama zabashayeli, ngizovuma.
Ngakolunye uhlangothi, i-Search Engine Marketing ingaqhathaniswa nesidingo esingenakugwenywa nesiphindaphindiwe, faka igesi elisha emathanini emoto. Ukuthatha ukubhekisela kwangaphambilini kwesevisi yokondla ngokulinganayo kusebenza ngokucacile kwe-SEO incazelo, kubonakala sengathi cishe noma yikuphi imisebenzi yokusekela nokulungisa ingancishiswa kwezinye iziqu eziyisisekelo. Ukwenza kanjalo (e. g. , ukuphatha iwebhusayithi yakho kuphela ngemizamo ephelele ye-SEO), uzokwazi ukuchaza izindleko ezinkulu kakhulu isikhathi eside, kodwa ugcine imoto yakho isebenza, okungenani ezingeni eliphansi lombala. Ngakolunye uhlangothi, ukubuyiswa kwamafutha kwe-SMM, kuyadingeka, ngakho-ke kusale indlela kuphela yokusebenzisa imoto yakho, ukushayela indlela yakho lapho uthanda nalapho udinga khona sonke isikhathi.
Bobabili i-SEO ne-SEM bayasebenza ensimini efanayo. Ngisho ukuletha izivakashi eziningi ku-platform yakho ye-intanethi. Ngokucacile kwe-SEO incazelo, ukusebenza ngewebhusayithi yezohwebo ehlelwe kahle futhi ikulondolozwe kuzokuletha ithrekhi eningi kakhulu ye-traffic organic. Kuyinto yokutshalomali yesikhathi eside neyinkimbinkimbi, okuqinisekisa ukugeleza kwakho okuzinzile kwamakhasimende wangempela, ngakho-ke izimali. Ukubheja kwe-SEM ekusesheni okukhokhelwayo, ngakolunye uhlangothi, kudingeke ukuba kudliwe njalo ngemali. Iqhuba imoto yakho ngokushesha, ngaleyo ndlela ibonise imiphumela ngokushesha, kodwa isendleleni yayo Source .